Soosaaraha Xirfadleyda Xirfadleyda Shiinaha guga caleen parabolic ee soosaarka iyo Warshadda Nissan | Jiachuang
Xirfad yaqaan soo saaraha gawaarida gawaarida xamuulka qaada ee Nissan
Qaybta MAYA. 54010-Z3007-FA JC MAYA. JCBHZA0242
Cayiman 90 * 12 (mm) Model Nissan
Waxyaabaha SUP9 / 55Cr3 MOQ 50 SETS
Dekedda Shanghai / Xiamen / Ningbo Lacag bixinta T / T, L / C, D / P
Waqtiga Hogaaminta 20-30 maalmood Damaanad 12 bilood
Xilliga gu'ga waxaa loo isticmaalaa gaari xamuul ah NISSAN.
Noocyada Cabbiraadda Guga
Guud ahaan 9 garbi, 1-9 Ballaca Baaxadda (mm) * Dhumuc (mm): 90 * 12, Cabirka Isha ilaa Isha 1550 mm (Cabirka Length Bilaash), Dulqaadka dhexdiisa ±3mm. 2pcs biametal bushesØ30 * Ø36 * 88 waxay u timid inay rakibto indhaha guga, 2-7 daab waa la dhajiyay.
Cabbiraad Arch oo Bilaash ah (fiiri sawirka) 120.5mm, Dulqaadku wuxuu ku dhex jiraa ±6 mm.
Dhammaan xogta waxaa lagu helaa iyadoo la cabirayo wax soo saarka cusub.
Guga Caleenta Parabolic
Asal ahaan guga parabolic waa gu 'ka kooban laba ama kabadan caleemo. Caleemaha waxay taabanayaan oo keliya bartamaha, halkaasoo ay ku xardhan yihiin dariiq dhexaad ah iyo cirifka dambe, halkaasoo ay ku xardhan yihiin gaariga. Inta udhaxeysa labadaas qodob caleemaha isma taabtaan sida ay ku sameeyaan ilaha caleemaha caadiga ah.
Caleen kastaa waxay u taagan tahay gug dhammaystiran oo iskeed ah oo sidan oo kale ayey u shaqeyn doontaa. Si ay u suuro gasho guga caleentiisu inay daaran tahay, min bartamaha (qaro weyn) ilaa cirifka dambe (dhuuban). Taperku waa mid isweydaarsi ah, waxay ka dhigan tahay in sentimitir kasta (ama inch) dhumucda caleenta ay hoos u dhacayso qaddar la xiriira shaqada laba jibbaaran ee dhererkeeda
Tani waxay u muuqan kartaa mid dhib badan laakiin dhab ahaantii waa mid aad u fudud. Caleen kastaa waxay yeelan doontaa, in ka badan ama ka yar, qaabka guga caleenta badan oo dhammaystiran sidaa darteedna ay awood u leedahay inay la qabsato isla xoogagga. Tani waxay ka dhigan tahay in guga jilicsan ee ku habboon uu yeelan karo hal caleemo oo keliya, hase yeeshe, noocan ah "mono leaf" guga wuxuu yeelan doonaa isku xirnaan / dheellitirnaan aad u kooban sababtoo ah culeysyo gudaha ka sarreeya sidaa darteed guga 2 ama 3 guga parabolic wuxuu u qeybin karaa walbahaarka si siman guud ahaan caleemaha kale sidaas darteedna dhaqdhaqaaq dariiq dheeri ah ayaa suurtagal ah. Taasi waa sababta aan u qaabeynay 2 iyo 3 ilo caleen. Sabab kale oo loo kordhiyo tirada caleemaha xilliga gu'ga ayaa ah in la kordhiyo heerka (awoodda xamuulka). Sababtoo ah caleen kastaa waa hal gu 'waxaan ku dari karnaa ama ku soo bixi karnaa caleemo iyadoo aan la gaabinaynin awoodda caleen ay iskeed u leedahay. Markaa tusaale ahaan waxaan haysannaa 3 guga gadaal gadaal waxaanna ku darnaa hal caleen oo la mid ah heerka ayaa kor u kici doona ilaa 30% taas oo macnaheedu yahay in culeyska culeyska uu kordhayo +/- 30% (iyadoo kuxiran saameynta shackle)
Qodobbada Muhiimka ahi Waxay Haysanayaan Tayo Sare
1) Matrail ceeriin.
Dhumuc ka yar 20mm. waxaan u dooran SUP9 / 55Cr3 / SAE5160H sida wax soo saarka
Dhumucdiisuna tahay 20-30mm. WE dooro SUP11A / 50CrVA
Dhumuc ka badan 30mm. Waxaan u dooranay 51CrV4 inay yihiin alaab ceeriin ah
Dhumuc ka badan 50mm. Waxaan u dooranay 52CrMoV4 sida alaabta ceeriin
2) Hawsha Quchenging
Waxaan si xeeladeysan u xakameynay heerkulka birta illaa 800 digrii.
Waxaan ku wareejinaynaa guga saliida qenching 10 ilbidhiqsi sida ku cad dhumucda guga.
3) Xabad toogasho.
Gug kasta oo is uruursanaya wuxuu hoos u dhigaa xoqidda walaaca.
Tijaabada daalku waxay gaari kartaa in ka badan 150000 cycus
Caleen kasta oo ka hooseysa rinjiyeynta katalofisis.
Tijaabada buufinta milixda waxay gaaraysaa 500hours
1.Wax ka goynta maaddada
7. Cadaadiska Cadaadiska
Q1: Noocee ah guga caleen aad soo saari karto?
J: Waxaan ku soo saari karnaa ilaha ugu badan ee suuqa. gaar ahaan ilaha isweydaarsiga.
S2: Maxaad kaheli kartaa guga caleenta?
J: Fasalkayaga maaddadu waa inuu noqdaa SUP9 / SUP9A / SUP11A / 51CrV4 / 52CrMoV4 / xitaa 55Cr3 iyo SAE5160H sidoo kale.
Q3: Mudo intee le'eg ayey noqon doontaa waqtiga dhalmadaada?
A: 20-40days. Haddii alaabtu ku filan tahay illaa 20 maalmood. hadaanay ahayn, waxay noqonaysaa 40 maalmood
Q4: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta ee la aqbali karo?
Q5: Waa maxay xirxirida?
J: Maya sariirta alwaaxda lagu shubo. waxaan sidoo kale xirxiran karnaa hadba wixii aad codsato haddii macquul tahay.
S6: Sidee ku saabsan dhammaystirka dusha sare?
J: dahaadhka electrophoresis (madow, casaan, cawl, ama macaamiisha codsiyada)
Hore: Iibinta kulul 11436 trailer ganaax qayb caleen guga
Xiga: 880368 BPW qaybo gaari xamuul ah caleen guga hakin hakin qayb guga
Guga Caleemaha Gawaarida
Ilaha Caleemaha Flat
Guga Caleemaha Gawaarida Gawaarida
Golaha Xilliga Guga
Qeybta Guga Guga
Soo saaraha guga caleenta
Hakinta Xilliga Guga
Guga Caleenta Iftiinka
Guga Caleenta Gawaarida Fudud
Guga Leaf Guga
Hakinta Qaybaha Caleemaha Guga
Guga Caleenta Guga
Caleen Guga Gawaarida
Tayo sare leh soo saaraha Shiinaha SUP9 caleen bir ...
TRA-2740 Trailer qayb caleen leaf guga parabolic ...
Tayo sare leh TRA-2726 SUP9 caleen steel guga fo ...
Gawaarida nalka fudud ee loo yaqaan 'gug caleen hore guga ...
1421060 caleen gaari xamuul guga qayb l ...